mhando 0.8.1 – Haisi kapukanana! chinhu chinokosha!
Zvita 12, 2011 kubudikidza chipo 46 Comments
Hunting netsikidzi vane michina yemhando yepamusoro
Pana Transposh isu kuzvikudza tiri Coding yedu yakakwirira zvinodiwa, izvi zvinoreva kuti hatina netsikidzi vari Software yedu. Ehe, iwe wakanzwa kodzero iyi, razero netsikidzi vakawana. zvisinei – pane dambudziko zvishomanana, vamwe vanhu havasi atifarire uye oita vane netsikidzi muna Codes dzavo. Saka kana waisa Transposh uye chinhu haasi kushanda nemazvo, Zvichida pane tsikidzi muna WordPress, kana kapukanana ari dingindira imi muri kushandisa, kana kunetsana nomumwe plugin, kana jQuery akaita zvimwe tsvina, kana uchiri kushandisa Internet Explorer 2 kana ichi chinhu nehochekoche mai vako, kana mai vake, kana ambuya, kana Sero rokutanga yakanga yati akasika. Hazvina isu! haamiriri!
Kana chimwe chinhu chisiri kushanda uye imi dzinoshuma kuti isu, isu pakarepo kuwana mumwe munhu kupomera, uye dzimwe nguva, apo kwemanzwiro rakanaka, isu chaizvoizvo Bumbiro chinhu kudzivisa vaya vamwe vanhu netsikidzi.
kusunungurwa Ndomumwe zvabudiswa ivavo, chete itsva inoti kukwanisa kuisa mashoko mitauro basa inowanikwa (kana munhu takaisa nechiSpanish apo chaizvoizvo vachivhura kwako nzvimbo Chirungu kana mutevedzeri ndima) .
Vamwe yokusunungurwa uyu:
Vakwanise kurarama shanduro dzevanhu negadziriro yeparutivi kuburikidza default
tsigirai ， chiratidzo muna parsing (Its kwete koma, kwazvo!)
Kutangazve makori rutsigiro AJAX wedu (Cross Origin Ajax)
Edza nechokwadi lazyloader mitoro vari zvakarurama chechinyorwa
KUISA kukarukureta noukuru Batch shanduro kudzivisa shanduro wakanyanyisa kukura Google
Isa apo vaviri jQueryUI shanduro vanobatanidzwa, zvikurukuru Wordpress 3.2.x
Wakaiswa Widget kubvisa [mutauro] waiva ngoro sezvatakaona naFiripi Trauring
Isa akaputsika site vanoshandisa vachishandisa Widget basa zvakananga
Tinovimba zvauchasangana kunakirwa shanduro iyi
Ina Under: Release zviziviso, Software Updates Tagged With: bugfix, kuduku, rusununguko
Zvita 13, 2011 pa 3:05 pm
“Translate All Posts” bhatani rinobviswa transposh muzviruva Panel muna WordPress 3.3!
Zvita 13, 2011 pa 3:12 pm
Kana, enda chidzitiro kusarudza panguva pamusoro peji uye nechokwadi mbiru mbiri vanosarudzwa.
Jijo Sunny anoti
Zvita 13, 2011 pa 4:34 pm
New shanduro rinowedzera chimwe Meta ukoshi nechimwe rakashandurwa mapeji. Anoramba kutsvaka injini kubva kwete Indexing nayo (handizivi nei).
Ndapota tarisa mariri.
Zvita 13, 2011 pa 4:39 pm
Ndine hurombo, kuti arege kuva chikonzero. Asi kunokonzerwa zvimwe zvikonzero, translated pages are not getting indexed 🙁
Zvita 13, 2011 pa 8:14 pm
Kana toreva ndinoziva rakashandurwa mapeji vari indexed. Transposh peji webmaster maturusi inoratidza mwero ~ 98% of mapeji vari indexed, uye ichi ndicho chete pasi ane SITEMAP XML izvo zvinosanganisira mitauro zvose. Unogona kuvandudza mikana yako wakati mapeji rakashandurwa nokushandisa petsanga Widget, kana pasi kwechokwadi SITEMAP, Google kunogonawo kushandisa rel Tag akawedzera mapeji, asi ichi ndicho shoma vamwe.
Zvita 16, 2011 pa 12:18 pm
Ndakawana chete Chirungu uchigutsikana sitemap.xml (XML-Sitemap Gen 3.2.6) . Sei nokusangana kugutsikana nomutauro vazhinji “kushandura zvose” vari sitemap.xml?
Zvita 25, 2011 pa 12:25 ndiri
Please kutevedzera mirayiridzo iri FAQ kuti gadziriro XML-Sitemap
Zvita 14, 2011 pa 2:29 pm
Thanks nokuti update. sei Ini kuchinja dropdown mireza? kwete zviri FAQ wako. Ndoupi PHP Ndinoita aongorore?
Zvita 14, 2011 pa 2:46 pm
Haudi tinoda FAQ, anowanzoita unotofanira kusarudza zvakakodzera Widget kuwanika nechitarisiko / Widgets Muterere.
Zvita 14, 2011 pa 3:19 pm
Asi ari inbedded kwangu Header wangu handina kushandisa kuburikidza Widgets sezvo kwakakonzera zvinetso pamberi. sei Ini kuchinja mireza munyaya iyi? Ndatenda
Zvita 14, 2011 pa 4:13 pm
Chaizvoizvo izvi kuoneka munyika FAQ, changed Header yako sezvinenge
Fabrice Meuwissen anoti
Zvita 14, 2011 pa 9:38 pm
About mireza Widget, Unoziva zviri flagged sezvo kuderera peji akurumidze ( google seo )
ari munhu aigona kushanda kuti dzifambirane chikamu ichi bumbiro ?
ona screenshot kubva Google mushumo ( sorry for the bad looking url 🙂 ) :
Zvita 14, 2011 pa 10:02 pm
Kune Widgets maviri, uye pasina CSS sprites, kana uchida munhu nokukurumidza mumwe, kushandisa CSS shanduro
Zvita 15, 2011 pa 12:08 ndiri
damn, Ndave ane fuza, Handina kuziva chii vaiva 2 Widgets, zvino Google wangu peji nokukurumidza nokuti http://www.obviousidea.com akamutswa kubva 86/100 kuti 92/100 pamwe uku chete !!! satendeseka !
zviya, isu achiudza nhasi transposh uye Wordpress 3.3 and you can see it works 🙂
Zvita 21, 2011 pa 6:45 ndiri
Ndine vaviri queries. Chekutanga, zvinobvira kuti munhu kushandura mapeji angu kuburikidza transposh. Ndinoreva kuti shamwari zvakarurama kushandura / kuchinja navo asi vachiri kushandisa transposh Widget?
chepiri, Ndiri nekubuda pamwe FB wangu sezvinoita Plugin zvinoita sokuti kuva nemafungiro yechiPutukezi mureza kubva transposh sezvo Thumbnail yangu vanhu Facebook rusvingo. Unoziva chinhu pamusoro ichi kana kana pane nzira kuzvirega kuitika?
Thanks nokuti nguva yako, zviri nguva dzose zvikuru.
Zvita 25, 2011 pa 12:28 ndiri
Nokuti nyaya yokutanga, unogona nguva dzose kupa shamwari yako nhoroondo iri paIndaneti wako muturikiri Permissions, Ndinotenda kuti izvi achaita zvaunoda.
Nezveshoko chinhu chechipiri, Handizivi kuti plugin, yakanakisisa nezvaaiita ndechokuti ukaronga tikiti kwatiri yedu budiriro Server, uye tichasvika kupinda kuti nenguva.
Zvita 28, 2011 pa 12:10 pm
Mhoro, Ndine zvakakomba 404 Not Found uye zvatisingagoni chimiro Google Web Tenzi Tools, akasaonekwa(24,206)‎, zvatisingagoni(21,368)‎ . It kuratidza ose zuva. Zvino wangu visittor uye chepamusoro musi Google anodonha kwazvo.
Ndapota zano ini inopisa kugadzirisa dambudziko iri. Uye ndokutenda zvikuru rubatsiro rwenyu.
Ndira 6, 2012 pa 1:18 ndiri
Shandisa kuonana chimiro uye titumirei dzimwe mharidzo Data uye tichazoona zvatinogona kuita.
Ndira 4, 2012 pa 8:44 pm
Ungave kuronga kuchinja transposh nokuda phpbb3 injini?
Ndira 4, 2012 pa 8:50 pm
Ehe, zviri kurongwa, vanoda kubatsira?
Ndira 4, 2012 pa 10:43 pm
Ehe, Ndinoda kubatsira, asi handizivi sei. Handisi PHP programmer.
Ndira 6, 2012 pa 1:15 ndiri
This is a good new year resolution 😉 learn some php programming while working on this project. Ndichange kufara nokukweretesa iwe ruoko pano uye imomo.
Ndira 8, 2012 pa 9:32 ndiri
Mhoro, Ndinoda kunatsurudza dambudziko rangu uye wakaiswa.
1. Ndaishandisa Google (XML) Sitemaps jenareta 4.0b8 Beta, It kuwedzera indekisi peji kwazvo.
2. Ndakachinja W3 Total cache kuti Quick cache, ndiko kushandiswa nokuda 3 gore. Quick cache kupfuura W3TC muna rokuti nokukurumidza uye kushandura nokukurumidza (kupfuura W3TC). Zadzisai by Google Webmaster Tools – Zvinokambaira stats kuti kana Ndinoshandisa W3TC, Time vakapedza kudhanilodha peji kuwedzera kuti 2000ms kubva <200MS, zvino kuderedza kana ini kushandisa Quick cache. Nokuti kwandiri plugin ichi akakodzera chete Transposh.
3. 404 akasaonekwa achiri dambudziko. Ndichaita kuongorora 3-4 Mazuva kana asina kutapudza, Ndichakubvunzai zvakare.
Ndira 8, 2012 pa 10:01 ndiri
@Yossawat, unogona kutumira kubatana ari paIndaneti kana peji, Ndinoda kuti muone, Ndaishandisa W3 zvachose cache uye transposh pachangu, kuziva kuona chii chingava dambudziko rako.
Ndira 8, 2012 pa 6:49 pm
Ndinokutendai zvikuru Fabrice Meuwissen, Zvino ini kwakatsiva W3TC kubudikidza Quick cache.
Ndira 8, 2012 pa 8:11 pm
anoita Quick cache mubato uyewo CDN kufanana Amazon S3 & cloudfront ?
Lars Erik Morin anoti
Ndira 10, 2012 pa 4:53 ndiri
Your basa rokushandura riri zvachose pusa. Zvimwe zviri zvakatowanda upenzi kuti shanduro kubva Chirungu kuti Swedish, sezvo Swede ose ndiani kufarira “rakashandurwa” Nzvimbo vachaziva Chirungu yakawanda kupfuura yenyu “sevhisi” kuziva Swedish. Vaverengi uchaseka kana kufinyama, chinhu bedzi havazorambi kuita kunzwisisa.
Ndira 10, 2012 pa 11:30 ndiri
chaizvoizvo Handina chokwadi nei ini mvumo mashoko ichi, zvakanga zvisiri zvakanaka chaizvo kana anodzidzisa. Zvandiri kutaura ndechokuti uri zvikuru kwakarurama zvimwe, Shanduro otomatiki anoita zvibereko zviri sizvo uye dzimwe nguva kunyange wosekwa, Zvisinei ndokusaka Transposh ariko, saka unogona kushandisa duku Edit rokushandura kubatana pasi Widget kuti chaizvoizvo kuchigadzira uye kuita zviri nani, izvozvo anorova chokwadi kuramba makopi maviri chete kugutsikana uye zviri nani pane shanduro otomatiki.
asi chaizvoizvo, haufaniri kuushandisa…
Ndira 16, 2012 pa 3:06 ndiri
Mhoro, pakutanga zvose ndinoda plugin wako!
Chepiri, Ndinoda rubatsiro shoma kana zvichibvira. Nzvimbo yangu zvinosanganisira mitauro yakasiyana uye yangu mutauro default iri Chirungu. Pandinenge ufambe kune yakasiyana mutauro pane Chirungu ari plugin nguva dzose kushandura zvose. Chinetso ndechokuti ndinoda kufanana plugin kushandura kunyange mutauro default (Chirungu) zvinoiswa, nokuti yangu shamwari yake inomubatsira wokudhinda basa kwete zvose zvawanyora ndiwo mutauro mumwe chete. Zvose kunobata akanaka ose namarimi asi default. Ndinotarisira zvakanga zvakajeka, kana usina unogona uchitarisa panzvimbo yangu faceboooh.com.
Ndira 16, 2012 pa 9:53 pm
Ini ndine nyaya chete uye kundovudza (uye vave vari tsambambozha tichikurukura Ofer) ambotaurwa uyewo.
Zvichida zvinotevera kuchabatsira Ofer? Ini achangobva achangogadzwa WP-FB-AutoConnect, uye zvisinei zvandakaita, Ndakaramba kuwana webpage kuti waiti, “Ndapota regai kuwana manyorero ichi zvakananga.” Kuburikidza zvikuru bvudzi-kudhonza, Ndakazoziva kuti plugin haana chaizvo ini danda kuti rangu nzvimbo kuburikidza FB yangu nhoroondo; zvisinei, Handina kuiswa redirected kuti peji yangu Homepage. The yokuvaka ini nechokwadi kuti kushanda.
saka, Ndakatendeuka kure ose plugin ndokutanga simba navo mumwe nomumwe. Chete haana kubvumira WP-FB-AutoConnect kugumisa zvakanaka raiva Transposh. Ini aparadzira izvi FB plugin yokuvaka akati izvi haisi kekutanga kuti ichi kwave vavaudza pamusoro Transposh.
Ndiri NOT muchigogodza Transposh. Ndinofunga kuti chinhu plugin rinoshamisa. Sewe, Zvandinoda uye zvechokwadi, chaizvoizvo kuda kuti kushanda wangu Buddypress nzvimbo. ovimba, ikakuruma uku mashoko kuchabatsira.
Ndira 18, 2012 pa 4:29 ndiri
Hi Quint, kuvonga nokuda kwenyu mashoko. Ndakanga chaizvo dambudziko iwe aine WP-FB car batanidza uye pashure rikaudza kuti yokuvaka Ini pakupedzisira vakazoguma kusiya WP-FB uye vachiitsiva ne Social-Connect. Ini chaizvo kuda kuchengeta transposh yandinoda uye ndinovimbawo kuti mumwe munhu pano anogona kutipa rubatsiro shoma.
Kukadzi 10, 2012 pa 6:35 ndiri
achitarisira Zvizere kuti uchaita kundiudza kuti izvi idambudziko kunze Transposh, asi Ungaverenga kanenge vane Kutarira mutsetse uyu kubva kwedu kukanganisa nerogi? Tinowana mumwe izvi sekondi.
[09-Feb-2012 14:39:05] PHP Warning: Kuedza kupa pfuma vasiri chinhu ari /home/apexwpa2/public_html/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php pamutsetse 656
Kukadzi 10, 2012 pa 11:56 pm
Handizivi nei zvinoitika, yakanakisisa bheji ndiko kungokonzera kudzvinyirira kukanganisa uchishandisa PHP wacho @ murayiro
Kukadzi 10, 2012 pa 12:18 pm
Ini dzadzimwa yakawanda nyaya kubva Blog wangu.
Ndakafunga kuti kukura matafura uye Translation translationlog kutapudzwa, asi hazvisi.
Ndinofunga kuti pane kuruboshwe shanduro iri Database maturo.
Pane nzira yokubvisa avo uye kuderedza Database?
P. S.: plugin ichi chikuru!
Kukadzi 10, 2012 pa 11:46 pm
Kunyange Handitendi kuti kukura Database kuchikosha zvikuru yanhasi nemitambo runyararo, kuti zvechokwadi kuva vakachenjera kuita zvimwe cleanups ako ezvinhu, riri marongero papeji, Ini pfungwa imi kubvisa zvose repair shanduro vakuru kupfuura 14 mazuva, musafunganya zvikuru kana iwe anorasikirwa chero motokari shanduro yaishandiswa avo vanofanira kuvakwazve zvakadaro.
Kukadzi 10, 2012 pa 2:29 pm
shamwari yangu Editing shanduro sezvo kusazivikanwa. Iye haana Logged kupinda dashboard wangu. The shanduro varipo kana ndiri Logged muna asi pandakangonzwa danda panze havasi ikoko. Pane imwe marongero kana bhokisi kuongorora pandinenge kubvuma kana kuti havo? Ndaiva pasi pfungwa yokuti munhu aigona aongorore uye kubudisa shanduro? zano chero zvaizoramba chaizvo sezvo nguva dzose.
Kukadzi 10, 2012 pa 11:44 pm
Unogona kuva caching plugin izvo zvisiri kuitwa wakavandudzwa, iyi ndiyo yakanakisisa bheji rangu pano
Kukadzi 10, 2012 pa 11:47 pm
Mazvita ofer! Tine W3TC, kana uchiziva chimwe nyaya zvakunokonzera pamwe Transposh, nditendere munoziva.
Kukadzi 11, 2012 pa 3:10 pm
Ini ndakakunda Akaremara TP_ENABLE_CACHE muna constants.php (change nhema) uye dzadzimwa cache (netori Super cache) asi achiri dambudziko anoramba. Ndinofanira wedzera transposh.js kuti vakaramba User nevasori?
Lars Rönnbäck anoti
Kukadzi 19, 2012 pa 10:25 ndiri
Ndine nyaya mbiri. Chekutanga, Ini akasaina amutsira Bing Translate API pana Windows Azure Pamisika uye vaikopa nhoroondo kiyi kupinda MSN API kiyi munda muna Transposh Settings. Ndakatenda izvi zvaizoita kuti kushandisa yokududzira akabayira pamusoro 2 miriyoni vatambi. zvisinei, hapana chinozadzwa rakashandurwa. Pandakamedurira baya “Translate All Now” bhatani zvinongoreva nguva kubuda mushure kuedza shanu.
chepiri, ari Popup pahwindo kwandatambura manually aongorore shanduro sokuti kuva yakaderera Z-indekisi ukoshi. Menu uye mifananidzo pamusoro payo, zvichiita zvakaoma kushandisa. Musoro Ndiri kushandisa iri “Twenty gumi 1.3”, izvo hazvifaniri kuti zvekumwe, muchifunga kuti kunokudziridzwa nokuda WordPress chikwata.
Kukadzi 20, 2012 pa 11:17 ndiri
Ungangodaro haana vaikopera API kiyi nokuda Bing nemazvo, uye iwe uri kuwana arwara AppID, zvisinei – kazhinji kacho hazvina zvakakodzera kushandisa zvachose, unogona chete kusiya munda amboita.
Nezveshoko Z-indekisi, Ndinofunga muri kwakarurama, uye izvi zvichakurukurwa wakaiswa mushanduro kuuya
Kukadzi 20, 2012 pa 4:21 pm
Ini akapinda API kiyi nokuti ndaifunga zvaidiwa. Ndine dambudziko chete kana ini kubvisa kiyi, ne “Translation kukwana” uye timeout pashure kuedza shanu, zvose pamwe Google uye Bing. Ndakaedza reinstalling, kubvisa shanduro zvose otomatiki, uye nekudzvanya ari parumananzombe zvakakanganiswa nemashoko yapfuura neshanduro bhatani. Kunyange zvakadaro hapana vanoenda. Ndave kumhanya Transposh kwenguva yakareba.
Thanks nokuti kugadzira ari Z-indekisi iri rinotevera shanduro!
Kukadzi 21, 2012 pa 8:21 ndiri
Google kushandura haasi kushanda uri panzvimbo nokuti havana rutsigiro pamusoro Server wako curl they raibhurari, MSN oita basa, uye ndinoona duku tsikidzi pachena kusarudzwa ane default injini, imi mune mbiri nzira ikozvino kugadzira ichi – Poshi – dzishandise curl they, uye vaviri, sarudza Bing sezvo dzenyu default mubrowser uri pazviruva ako peji.
Ndapota yokundizivisa sei ainoita
Kukadzi 21, 2012 pa 5:17 pm
Ndokutenda zvikuru! A nyore 'vaigona-kuwana dzishandise php5-curl they’ did the trick 🙂
Kurume 4, 2012 pa 10:13 pm
Ini ndakagadza ichi ichangoburwa shanduro transposh website yangu (www.duttotech.com) asi rakashandurwa mumitauro Chirungu uye Italian hazvina indexed Google…
itai Ndine yokugadziridza vamwe ezvinhu kuti?
Kubvumbi 29, 2012 pa 12:22 ndiri
Kufanana neni, dzimwe nguva Google anotora nguva, Ini kuona Chirungu mapeji zvenyu nzvimbo kuitwa indexed zvino…